၁၀ တန်းအောင်ပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သူများအတွက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » ၁၀ တန်းအောင်ပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သူများအတွက်
၁၀ တန်းအောင်ပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့သူများအတွက်
Posted by manawphyulay on Jul 16, 2010 in Creative Writing, Drama, Essays.. |6comments
ကြိုးစားခြင်းနဲ့ ရွေးချယ်ခြင်း ဘယ်ဟာက ပိုအရေးကြီးသလဲ။ ကျွန်တော်တို့ ပတ်ဝန်းကျင်မှာ တလွဲတချော် အောင်မြင်မှုတွေ အများကြီး တွေ့ရတယ်။ ဆရာဝန်ဖြစ်ပြီး ဆေးကုသခြင်းမရှိတဲ့ ဆရာဝန်တွေအများကြီးပါ။
ဆရာဝန် ကျောက်ပွဲစား၊ ဆရာဝန် စက်မှုပညာရှင်၊ ဆရာဝန် စာရေးဆရာ၊ ဆရာဝန် ကုန်သည်၊ ဆရာဝန် သရုပ်ဆောင်၊ ဆရာဝန် အဆိုတော် စသဖြင့် ဒီလိုဘဲ စက်မှုတက္ကသိုလ်ဆင်းပြီး စက်မှုနဲ့ အသက်မမွေးတဲ့သူတွေ
တစ်ပြုံကြီးရှိတယ်။ ဥပဒေဘွဲ့ရပြီး ဥပဒေပညာရပ်နဲ့ ရပ်တည်သူ ရှားပါတယ်။ စီးပွားရေး တက္ကသိုလ် ဆင်းပြီး ဘ၀ကို အဆင်ပြေသလို ဖြတ်သန်းနေရတဲ့သူတွေ အများကြီးပါ။ ရိုးရိုး တက္ကသိုလ် ဆင်းပြီး ဆရာ ၊ ဆရာမ
ဖြစ်နေသူတွေအများကြီးပါ။ မိဘတွန်းအားကြောင့် မိဘဖြစ်ချင်တာကို လုပ်ပေးတယ်။ ပြီးတော့မှ ကိုယ်ဝါသနာ ပါတာကို ဇွတ်လုပ်တယ်။ ဒီလိုနဲ့ ဘ၀မှာ အလွဲတွေ အလွဲတွေအများကြီးဘဲ။ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ
အမှတ်ကောင်းရင် ဆေးကျောင်း၊ ဒီအယူအဆက တော်တော်ကြီးကို အရိုးစွဲနေပါပြီ။ ဆေးပညာရပ်တွေလိုဘဲ တခြား ပညာရပ်တွေကလည်း အရေးကြီးတာပါဘဲ။ အသုံးတည့်တာပါဘဲ။ ဒါကြောင့် ကိုယ့်ရင်းနှီး
စိုက်ထုတ်မှု၊ အချိန်ကုန်မှုတွေကို တလွဲတချော်မဖြစ်အောင် ၀ါသနာ ပါတာကို ရွေး၊ စိတ်ဝင်စားတာကို ရွေးချယ်သင့်တယ်။ ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်မှ ကြုိးစားခြင်းဟာ အဓိပ္ပါယ် ရှိပါမယ်။
Good idea, but difficult to follow,,,,
because of current Burmar’s situation.
ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကိုဖြစ်အောင်လုပ်ပါ……အိမ်ကဆရာဝန်လုပ်ခိုင်းတိုင်း ၀ါသနာ မပါရင်ခေါင်းခါနိုင်အောင်ကြိုးစားပါ….မဖြစ်ဘူးဆိုတာ မရှိဘူး…. Life is not smooth. Are You Understand?
အရေးကြီးတာက ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာကတော့ ဖြစ်ချင်မှလဲဖြစ်လာမှာပါ။
ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကို အမြင့်ဆုံးမှာထားပြီး မြင့်မားတဲ့မျှော်လင့်ချက်မျိုးနဲ့ ဘ၀ကိုတည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ရွေးချယ်သင့်တယ်…. ရွေးချယ်မှု မှန်ကန်ဖို့လည်း လိုအပ်တာပေါ့…. ရွေးချယ်မှု မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့ ဘ၀ကို အောင်မြင်စွာကျော်ဖြတ်နိုင်ကြပါစေ…..
ဒါကတော့ တကယ်ပါ။ မြန်မာပြည်ထဲမှာ အမှတ်ကောင်းလို့ ဆေးကျောင်းရောက်နေတဲ့ လူတွေ တပုံကြီးပါ။ ကျောင်းပြီးတော့လည်း ကိုယ်ကျောင်းပြီးတဲ့ ဘွဲ့နဲ့ မဆိုင်တဲ့ အလုပ်တွေမှာ လုပ်နေကြတဲ့လူတွေလည်း များပါတယ်။ အဓိကပြောရရင် မြန်မာပြည် ပညာရေးနဲ့ ပက်သက်ပြီးတော့ ခြွင်းချက်တစ်ခုပေါ့။ မြန်မာပြည် ကျောင်းအများစု
တွေက ကျောင်းမှာ သက်ဆိုင်တဲ့ လုပ်ငန်းခွင် မရှိကြပါဘူး။ ကျောင်းခန်းထဲမှာ လည်း စာတွေ့လောက်ပဲ သင်ပေးနိူင်ကြတာပါ။ သင်ပေးတဲ့ ဆရာ ဆရာမကလည်း သင်ခန်းစာနဲ့ ပက်သက်ပြီး သူတို့လည်း စာတွေ့လောက်ပဲ သင်ခဲ့ကြတာပါ။ တကယ်သိ တကယ်တတ်တဲ့ ဆရာ ဆရာမများလည်း ရှိပါတယ်။ အဲလိုဆိုရင်တော့ သူတို့ရဲ့ ကျောင်းသား တွေတော့ ကံကောင်းတာပေါ့။
နောက်တစ်ခုက မြန်မာပြည် ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေက မိမိဝါသနာပါတဲ့ ကျောင်းတွေကို ရွေးချယ်ခွင့်မရှိသလို ဒါမှမဟုတ် မရွေးချယ်ရဲကြပါဘူး။ အလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းကောင်းတဲ့ ရေစီးကြောင်းနောက် လိုက်နေကြရတာပါ။ ကျောင်းပြီးရင် လခဘယ်လောက်ရမယ် အလုပ်အကိုင်ပေါလားဆိုတဲ့ အတွေးတွေပေါ်မှာတင် ၀ါတနာဆိုတာကြီးကို စွန့်လွှတ်လိုက်ကြပါတယ်။ ဒါက အပြစ်တစ်ခုလို့ ဆိုလိုလို့ မရပါဘူး။ ရေစီးကြောင်းနောက် လိုက်နေရတာပါ။
မှန်ပါတယ်။ အသက်ရှင်နေစဉ်အချိန်လေးမှာ ကိုယ်ဝါသနာပါတာ ကိုယ်လုပ်ချင်တာကို အသက်မွေးဝမ်းကြောင်း တစ်ရပ်အနေနဲ့ ရှင်သန်နေသင့်ပါတယ်။ တခါတလေ ကိုယ့်ဝါသနာကို မသိပါဘူး။ ဘယ်မှာ ဖြစ်မြောက်မယ်ဆိုတာ လဲ လုပ်ကြည့်မှသိတာပါ။ အဓိက ကတော့ ရဲရဲလုပ်ဖို့ပါ။ ဆုံးရှုံးပြီးမှ ရတဲ့ တန်ဖိုးဟာ အဖိုးတန်ပါတယ်။ နောက်တော့ လမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်သွားမှာပါဘဲ။ ဘာမှမလုပ်ဘဲနေရင်တော့ ဘာမှဖြစ်မှာ မဟုတ်ပါဘူး။